Air Canada na Transat kwụsị nkwekọrịta nnweta akwadoro
Home » Akụkọ ụgbọ elu » Air Canada na Transat kwụsị nkwekọrịta nnweta akwadoro
Air Canada na Transat na-akpọ ahịa $ 190 nde
Akagbuola nnweta nke Transat site na Air Canada
Air Canada na Transat kwetara na June 2019 na nnweta
Emegharịrị okwu na 2019 wee degharịrị na 2020 n'ihi oke akụ na ụba nke ọrịa ọrịa COVID-19
Air Canada na Transat AT Inc. kwuputara taa na ha kwekọrịtara ọnụ ịkwụsị nkwekọrịta nkwekọrịta maka nnweta nke Transat nke Air Canada.
Air Canada na Ntughari ekwenyeburu na June 2019 maka nnweta ahụ, edegharịrị usoro ya na August 2019 wee dezie ya na Ọktoba 2020 n'ihi oke nsogbu akụ na ụba nke ọrịa COVID-19.
Dịka ekwuputara na mbụ, nnweta ahụ dabere na nnabata nke ndị isi nchịkwa dị iche iche, gụnyere European Commission ("EC"). Iji mezuo ọnọdụ ahụ dị mkpa, Air Canada nyere ma bulie ngwugwu ọgwụgwọ dị oke mkpa, nke gafere oke azụmaahịa ezi uche dị na ya chọrọ site na Air Canada n'okpuru nkwekọrịta nkwekọrịta na ihe EC nabatarala na mbụ njikọ ikpe ụgbọ elu gara aga. Site na mkparịta ụka na nso nso a na EC, ọ bịara doo anya, agbanyeghị, na EC agaghị akwado nnweta ahụ dabere na ngwugwu ọgwụgwọ a na-enye ugbu a.
Mgbe eji nlezianya tụlee, Air Canada kwubiri na ịnye mgbakwunye, ọgwụgwọ ndị na-atụ egwu, nke nwere ike ọ gaghị echekwa nkwado EC, ga-emebi ikike Air Canada nwere ike ịlụ mba niile, na-emetụta ndị ahịa, ndị ọzọ metụtara ya na atụmanya n'ọdịnihu ka ọ na-agbake ma na-ewughachi site na mmetụta nke ọrịa na-efe efe COVID-19. Karịsịa na gburugburu ebe a siri ike, ọ dị mkpa ka Air Canada lekwasị anya na imepụta ọnọdụ kachasị mma maka mgbake ya niile site na ichekwa na itinye ikike ya na akụ ya niile gụnyere ọdịbendị ndị ọrụ ya siri ike.
Ma Air Canada na Transat kwetara ịkwụsị nkwekọrịta nkwekọrịta ahụ na Air Canada na-akwụ Transat ụgwọ ịkwụsị $ 12.5 nde, yana Transat enweghịzi ụgwọ ọrụ ọ bụla iji kwụọ Air Canada ụgwọ ọ bụla kwesịrị Transat itinye aka na nnweta ọzọ ma ọ bụ azụmahịa yiri ya na ọdịnihu.
Lọ mmegide megide paspọtụ ọgwụ mgbochi n'ime UK
Nzukọ Pan-Caribbean na-enye ìhè na East Indian Community na St. Vincent